Onye na-agbanye ụlọ maka akwa akwa maka kichin
Na oge anyị a enweghị otu nna-ukwu nke na-enweghị ekele maka ihe mepụtara nke ihe dị otú ahụ dịka akwa akwa akwụkwọ. Ngwaahịa a bụ ihe dị oké mkpa na ezinụlọ.
Akwa akwa akwa dị otú a dị mfe na kichin - ọ dị ọcha, ma dị mma na nri, na, dị mkpa, ha anaghị achọ ịsa. Ma n'ihi na ha na-eji ọfụma eme ihe dị mma ịnweta ngwaọrụ pụrụ iche akpọ onye na-ejide akwa akwa.
Dịka o siri pụta, ụdị ngwaọrụ ndị a nwere ike ịbụ ụdị dị iche iche. Nke mbụ n'ime ha bụ desktọọpụ otu. Uru onye njide a bụ agagharị. A na-esi ebe dịgasị iche iche na-aga ebe obibi na onye ọzọ.
N'ụzọ ụfọdụ, nke a dị mma: a pụrụ ịkpali ha site na tebụl iri nri ma ọ bụ n'ebe ọzọ. Ma na usoro isi nri, ndị na-edebe desktọọpụ adịghị adaba, ebe ọ bụ na ha na-enwekarị mgbagwoju anya n'okpuru aka. Ya mere, ọkacha mmasị na kichin bụ ihe mgbidi maka akwụkwọ akwa akwa.
Onye njide maka akwụkwọ akwa akwụkwọ na kichin
Ihe mgbidi ahụ maka akwa akwa akwụkwọ bụ ngwa dị mfe nke a pụrụ ịzụta na ụlọ ahịa ọ bụla. Ejiri onye njide a na ebe dị mma na mgbidi ma ọ bụ na mkpuchi, ọ naghị ewepụ ohere karịa na kichin ma ghara inwe mgbagwoju anya na aka.
Enwere ụdị ọzọ nke ihe nkedo akwa nhicha - ihe nkedo. A na-akpọkwa ha ndị ejidere ụgbọ okporo ígwè. Ụdị ihe ndị a bụ ihe kachasị mma ma dị mma. N'ile anya, ọ dị ka ogologo osisi, nke a na-eji ihe nkedo pụrụ iche. Oge ọ bụla, ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike wepu onye njide a ma debe ya na tebụl gị.
Na ụdị nke ejiri aka anyị wepụtụ ntakịrị, ọ na-anọgide nanị iji dozie ihe ndị eji eme ha. Dị ka usoro, a na-eji ígwè, osisi na plastic mee ihe maka ngwaọrụ ndị a.
Maka ndị na-ahụ maka ihe niile e kere eke, nhọrọ nke osisi dị mma. Ma, ị ga-atụle nke ahụ maka ihe eji osisi mee ka ịchọọ okpomọkụ na iru mmiri mgbe niile. Ngwaahịa sitere na osisi dị mma na mbụ, na mgbe ihe dịka otu afọ, ha na-efu ọdịdị mbụ ha.
Onye na-ahụ maka plastik, ị nwere ike ịsị, bụ ọnụọgụ akụ, nke enweghị ike ịnya isi maka àgwà ya, ma ọ bụ ọdịdị dị mma.
Ihe ngwọta kacha mma maka kichin bụ onye njide maka akwa akwa akwụkwọ mere site na nchara igwe.
Sereiki nzacha maka nchacha mmiri
Kedu ụdị onye na-ehichapụ ihe dị mma ka mma ịzụta?
Kedu otu esi ezukọta onye ofufe?
A nri maka ụtụtụ ụra
Ụdị maka candies na osisi
Ntughari nke okpukpu atọ
Nkịtị na-emekọrịta ihe na ihe ngosi
Igbe nchekwa nchekwa
Na-eri nri maka ịsa ahụ
Igbe maka ịchekwa akwụkwọ nri
Olu na Ahịa Massager
Iji ihe oriọna na-azọpụta ume
Nwatakịrị ahụ nwere ntụgharị snot
Harrison Ford nke dị afọ 73 ga-aghọkwa Indiana Jones ọzọ
Lee ka esi sie nri esi nri - na ntụziaka
Kedu ihe ị ga-eyi akwa ejiji?
Nri na intestinal diverticulosis
Paracetamol maka ụmụaka
Anụ ọka na-esi nri
Nwee uwe na uwe
Ebumnuche ndi mmadu na-eche echiche 2017 - foto nke echiche na usoro kacha mma
Esi eji ejiji agba agba 2013?
Kedu ihe ị ga-ahụ na St. Petersburg na ụbọchị 3?
Kedu ihe ị ga-eyi akwa akpa akwa?
Snud na-asụ Bekee
Nwa umengwụ - esi agba ọgụ?
Ejiji ejiji - Fall 2014
Ụmụnna Kardashian boro ebubo ụgha
Gịnị mere ị ga-eji na-eri nri achicha?
Mmiri ara ehi thistle - ọgwụ Njirimara
Ebe a na-asa ahụ na ime ụlọ ịsa ahụ
Ihe na-ekpo ọkụ maka ákwà